Google Reader oo ka socda Shaybaarka Google | Martech Zone
Google Reader oo ka socda Shaybaarka Google
Axad, Juun 23, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Waa habsan goor dambe waana inaan runtii hurdaa. Laakiin anigu ma ihi. Waxaan ku eedeynayaa Google. Waxaan hubinayay xiriiro qaar oo tixraacayay balooggeyga Google Analytics oo aan la kulmay: http://www.google.com/reader/view/
Waxaan go aansaday inaan arko waxa xiriirku yahay sidaa darteed waxaan ku tuuray baarkayga cinwaankayga. Waan ku faraxsanahay inaan sameeyay! Google waxay dhistay wax yar oo akhris ah oo ku saleysan websaydhka. Waxaan galiyaa dhammaan qoraaladayda dhammaan baloogyada aan iska hubiyo maalin kasta. Google ayaa sameeya inta hartay. Waxay haysaa qoraalada aan akhriyay iyo kuwa aanan aqrin. Waxay sidoo kale ii oggolaaneysaa inaan calaamadeeyo quudintayda. Tani waxay ka badan tahay nidaamka kala-saarista quudintaada. Waxaad sidoo kale ku tuuri kartaa xiddig qoraallada aad runtii jeceshahay.
Akhristaha websaydhku wuxuu ku fiicanyahay aniga maaddaama aan aqriyey labadaba shaqada iyo guriga. Waayahay, ma xuma. Runtii maahan wax aad u qurux badan oo aad dhahdo…
Waxaan soo qaatay Freakonomics iyo The Long Tail maanta laakiin ma aanan bilaabin iyaga. Berri iyagaan dul joogi doonaa!
G'night qof walba!
Jack Welch waa Qalad
Bill Gates iyo Napoleon Dynamite
Jul 26, 2006 markay ahayd 7:00 AM
OK, waad i heshay Hadda waa inaan tagaa si aan u hubiyo Google Reader!
Apr 21, 2007 at 4: 02 AM
Waan ku arki doonaa… Thanks, waa wax weyn in la helo faallooyinka wanaagsan.
[URL = http: //www.macronet.org/cgi-bin/netforum/cafb/a/3-23] daawashada nuqulada [/ URL] [URL = http: //www4.gu.edu.au/cgi- bin / netforum / artspg / a / 3-2] ka iibso ultram khadka tooska ah [/ URL] [URL = http: //www.usawaterways.com/cgi-bin/netforum/nashbridge/a/3-29] vicodin online [/ URL] URL] [URL = http: //www.macronet.org/cgi-bin/netforum/cafb/a/3–24] Looma bixin amaah fakis amaah ah [/ URL] [URL = https: //itc.utk.edu/ cgi-bin / netforum / tiyaatar100 / a / 3-22] shandadaha gacmaha oo la mid ah [/ URL] [URL = http: //www.usawaterways.com/cgi-bin/netforum/nashbridge/a/3-30] safka hore oo lagu daray eeyaha [/ URL] [URL = https: //itc.utk.edu/cgi-bin/netforum/theatre100/a/3–21] XADGUDUB SHARCIYADA SHAQADA SHAQAALAHA SHARCIGA BILAASH AH [/ URL]
Deymaha mushahar bixinta ee fakiska ah AQOONSIGA SHARCIYADA XUN EE SHARCIYADA shandadaha gacmaha vicodin daawashada replica online-ka waxay iibsadaan Ultram khadka hore ee internetka oo lagu daro eeyaha
Apr 21, 2007 at 10: 01 PM
Haddii aad runtii rabto inaad labisto, kala soo bax qalabka 'Stylish plugin' ee Firefox oo ku rakib mawduucan - waaw!